एनआरएन अमेरिका चुनाबी चटारोमा, विवाद र मुलथलोको राजनीतिक प्रभाव, अध्यक्ष प्रत्याशीहरुको विचार « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
एनआरएन अमेरिका चुनाबी चटारोमा, विवाद र मुलथलोको राजनीतिक प्रभाव, अध्यक्ष प्रत्याशीहरुको विचार
२९ चैत्र २०७१, आईतवार ०६:२२ मा प्रकाशित
किशोर पन्थी, गोकुल श्रेष्ठ, न्यूयोर्क, २९ चैत्र । एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा श्री पराजुली , डाक्टर केशव पौडेल, दुर्गाप्रसाद दाहाल, गणेश कुँवर, नगेन्द्रनाथ पौडेल र रमा सिंह रहेका छन् । पराजुली न्युयोर्क निवासी हुन् भने केशव पौडेल न्यु मेक्सिको निवासी हुन् । त्यस्तै दाहाल क्यालिफोर्निया निवासी हुन् भने कुँवर मेरिल्याण्ड निवासी हुन् । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार नगेन्द्रनाथ पौडेल पनि मेरिल्याण्ड निवासी हुन् भने सिंह नर्थ क्यारोलिनामा बस्दै आएकी छिन् ।
यी हुन् एनआरएन अमेरिकाका बरिष्ठ उपाध्यक्षका चार उम्मेदवार:
एनआरएन अमेरिकाको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चारको उम्मेदवारी परेको छ ।
एकजना निर्वाचित हुने यो पदमा उम्मेदवारी दिने चारजनामध्ये तीनजना न्युयोर्क निवासी हुन् ।यो पदमा न्युयोर्क निवासी विश्व शाह, कृष्ण पोखरेल, नेदेन डोंगोला र नर्थ क्यारोलिना निवासी शिव विष्ट रहेका छन् । पोखरेल एनआरएन अमेरिकाको वर्तमान कार्यसमितिका महासचिव समेत हुन् भने शाहले गतवर्षको एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थिए ।
महासचिवमा दुईजनाको उम्मेदवारी, श्रेष्ठ र थापाबीच दोहोरो भीडन्त :
एनआरएन अमेरिकाको महासचिव पदमा जम्मा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षमा आधादर्जनको उम्मेदवारी परेपनि महासचिव पदमा भने जम्मा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
महासचिवमा तिलक श्रेष्ठ र कुन्ती थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् । श्रेष्ठले गतवर्षको चुनावमा पनि महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर चुनाव जित्न भने सकेनन् । महासचिवका दुबै उम्मेदवारहरु न्युयोर्क निवासी हुन् ।
चारजना निर्वाचित हुने उपाध्यक्ष पदमा १२ जनाको उम्मेदवारी :
एनआरएन अमेरिका चारजना निर्वाचित हुने उपाध्यक्ष पदमा १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये ४ जना महिला छन् । एनआरएन अमेरिकामा उपाध्यक्ष पदमा महिलाको बढ्ता आकर्षण देखिएको छ । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा बलराम थापा, बन्दना कोइराला, डिल्ली भट्टराई, गोपेन्द्र भट्टराई, ज्ञानदीप लामा, मोहन थापा, मोहन तिमिल्सिना, रविना थापा, राम पोखरेल, सञ्जिव श्रेष्ठ, सीता खरेल र उमा थापा रहेका छन् ।
आईसीसी सदस्यका लागि १२ जनाको उम्मेदवारी, महिला उम्मेदवार एकजनामात्रै :
अमेरिकाका तर्फबाट पाँचजना निर्वाचित हुने एनआरएन आईसीसीको सदस्य पदमा १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेहरुमध्ये ११ जना पुरुष रहेका छन् भने महिला एकजनामात्रै रहेकी छिन् । डाक्टर विनोद शाह र नविन शेरचन गतवर्ष पनि आईसीसी सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । आईसीसी विधानमा भएको प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै सृजित विवादले उम्मेदवारी दिएका सबैजना चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अन्यौल कायम छ ।
आईसीसीले एनआरएन अमेरिकाको चुनावलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रोकाको आरोप
अमेरिकाका तर्फबाट एनआरएन आईसीसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुका लागि अप्रिल १६ देखि २० सम्म हुने चुनावलाई आईसीसीका तर्फबाट नै अन्यौलमा पार्न खोजिएको एनआरएन अमेरिकाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विनोद रोकाले आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलबार साँझ आकस्मिक कन्फ्रेन्स फोनमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी रोकाले भन्नुभयो –‘चुनाव आउन १० दिन पनि बाँकी छैन । तर आईसीसी सदस्यका लागि उम्मेदवारको योग्यताबारे आईसीसीका तर्फबाट अहिलेसम्म स्पष्ट पारिएको छैन । समयमै जवाफ नदिएर अन्यौलको अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ । ’
आईसीसी सदस्यमा उम्मेदवारी दिनका लागि एक कार्यकाल एनसीसीको कार्यसमितिमा रहेको हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न अन्यौलका कारण आईसीसी सदस्यका लागि हुने चुनावमा अगाडि बढ्न नसकिएको आयुक्त रोकाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘हामीले यो प्रावधान स्पष्ट पार्न आईसीसीलाई पत्राचार गरेका थियौं । तर आईसीसीले विधान ब्याख्या समितिको निर्णय पर्खन भन्दै हामीलाई अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गरेको छ । किन यत्रो दिनसम्म पनि व्याख्या समितिले यसबारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन ? राजनीतिक खिचतानी र पदको हानथापका कारण संस्थालाई भद्रगोल पार्न पाइन्छ ?’
हजारौं मतदाताहरुलाई चुनावका मुखमा गुमराहमा पार्न खोजिएको आरोप लगाउदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विनोद रोकाले प्रश्न गर्नुभयो –‘हजारौं मतदाताले चुनेका व्यक्तिलाई आईसीसी सदस्यमा पठाउने कि चाकरीका आधारमा कुनै व्यक्ति आईसीसी सदस्यमा मनोनित हुने वातारण बनाउने ?’ आईसीसी र आईसीसीको विधान व्याख्या समितिको कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकाले भोलि बुधबारसम्म यसबारे निर्वाचन आयोग आफैले निर्णय लिएर चुनावी प्रकृयामा अगाडि बढ्ने रोकाले बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले अप्रिल ३ मा उम्मेदवारहरुको अन्तिम सुची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेपनि उत्पन्न अन्यौलका कारण आईसीसी सदस्यका उम्मेदवारहरुको अन्तिम सुची अहिलेसम्म प्रकाशन गरेको छैन । एनआरएन एनसीसीका लागि हुने चुनावका लागि भने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम सुची सोमबार प्रकाशित गरिसकेको छ ।
दावी विरोधको अवधिमा पनि कुनै पनि आईसीसी सदस्यका उम्मेदवारहरु अयोग्य रहेको भन्दै कतैबाट दावी विरोध समेत नआएकाले आईसीसीका तर्फबाट तुरुन्तै विधानको ब्याख्या नगरिए आफूहरु चुनावका लागि अगाडि बढ्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रोकाको कथन थियो । उहाँले भन्नुभयो –‘अब हामीसँग उम्मेदवारको अन्तिम सुची प्रकाशित गर्नुको विकल्प छैन । हामी आईसीसी सदस्यका लागि अलग्गै चुनाव गराउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौै । ’ एक कार्यकाल एनसीसीमा नरहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य घोषित गरेर चुनाव गराउन वा चुनाव स्थगित गर्नका लागि आफूलाई आरसी र डीआरसीका तर्फबाट दवाव आइरहेको पनि आयुक्त रोकाले गुनासो गर्नुभयो ।
उम्मेदवारी दिएका १२ जनामध्ये पहिले नै कार्यसमितिमा रहेका ५ जनाले चुनाव रोक्न सुझाव दिएको र अरु ७ जनाले चुनाव गराउन सुझाव दिइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । रोकाले भन्नुभयो –‘हामी कानुन र प्रणाली अनुशार चल्न चाहन्छौं । हामी बाहिरबाट गरेको निर्देशन अनुशार चल्ने कि अमेरिकाभित्रको स्पीरिट अनुशार काम गर्ने ? सुझाव चाहियो । ’
एनआरएन अध्यक्षका उम्मेदवारहरुले चुनाव जिते के गर्लान् ? हारे के गर्लान् ?एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा श्री पराजुली , डाक्टर केशव पौडेल, दुर्गाप्रसाद दाहाल, गणेश कुँवर, नगेन्द्रनाथ पौडेल र रमा सिंह रहनुभएको छ । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका पराजुली यसअगाडि एनआरएन अमेरिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने केशव पौडेल एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार । हामीले एनआरएन अमेरिकाका सबै जना उम्मेदवारहरुलाई एनआरएन अमेरिकाको चुनाव जितेमा के गर्नुहुन्छ ? र हारेमा के गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधेका थियौं । प्रस्तुत छ उहाँहरुको जवाफ जस्ताको तस्तै ।
सबै वर्गका समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि प्रयत्न गर्नेछु :: श्री पराजुली, अध्यक्ष उम्मेदवार, एनआरएन अमेरिका
एनआरएन अमेरिकाको नेतृत्वमा पुग्नु भयो भने के के गर्नुहुन्छ ?
हामीले समस्याको निराकरण गर्नु भन्दा पहिले समस्याको पहिचान गर्न जरुरी छ । म उपाध्यक्ष रहेकै अवस्थामा पनि हामीले अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको समस्याको पहिचान गर्न सकेका छैनौं । अमेरिकामा बस्ने हामी नेपालीहरु विभिन्न वर्गका छौं । एउटा विद्यार्थी वर्ग छ भने अर्को वर्ग निकै सम्भ्रान्त, व्यवसायिक, शिक्षित र एकदम माथिल्लो स्थानमा पुगिसकेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण मार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ । जो सारै कष्टपूर्ण जीवन गुजारी रहेको छ । अर्को वर्ग तपाई हामी जस्तो छ । जो पत्रकारिता र सामाजिक क्षेत्रमा लागेका छौं । सिमित व्यक्तिहरु मात्र यो क्षेत्रमा लागेका छौं । एनआरएन भनौ वा यहाँका सामाजिक संस्थामा तपाई हामी जस्ता वर्ग मात्र लागेका छौं । एउटा सिमित वर्ग मात्र यसरी लागेको छ । अरु वर्गलाई यसमा सम्मिलित हुन सकेको छैन । यो वर्ग किन सहभागि हुन सकेन भन्ने अहम प्रश्न छ । विद्यार्थीहरुलाई हामीले विश्वास दिन सकेका छैनौं कि हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्छौं भन्ने कुरा । त्यस्तै जोखिमपूर्ण मार्गबाट आएका नेपालीहरु जसले निकै कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरु सामाजिक मात्र होइन निजीगत रुपमै ठूलो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुले नैराश्यको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन् । अर्को शिक्षत र सम्भ्रान्त वर्ग जो अमेरिकी सरकारको माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । त्यो समुदाय पनि हामी सँग जोडिन चाहँदैन । आखिर किन यस्तो भईरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनौं र विश्लेषण पनि गरेका छैनौं । एनआरएनलाई सबैको साझा संस्था बनाउनका लागि यी वर्गसँग बृहत अन्तरक्रियाको जरुरी छ । त्यो बृहत अन्तरक्रियापछि मात्र हामी निचोडमा पुग्छन सक्छौं । उनीहरुको चाहना के हो भन्ने विषय हामीलाई थाहा हुनेछ र एनआरएनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयको आँकलन हुनेछ । त्यसैले यो मूल कुराको खुलासा नभएसम्म हामीले केहि पनि गर्न सक्दैनौं । जवसम्म यो पाटोको खुलासा हुन सक्दैन तवसम्म अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई यो गर्छु वा त्यो गर्छु भन्नु गलत हुनेछ । मैले अहिले यो गर्छु वा त्यो गर्छु भन्ने बुँदागत एजेण्डा छैनन् । कोहि उम्मेद्वार साथीहरुले त्यो सोंच्नु भएको छ भने अनुमान नगर्नुस् । जुन कुरा तपाईको हातमा छैन र बुझ्नु भएको छैन भने अर्थात जुन रोग बुझ्नु भएको छैन, त्यसलाई औषधी दिने काम नगर्नुस् । रोग नै थाहा छैन भने औषधी नदिनु्स्, त्यो समाजका लागि घातक हुनेछ । आज चुनाव जित्न कै लागि ५ वटा मिठा मिठा लाईन म पनि लेख्न सक्छु । त्यसैले मेरो एजेण्डा भनेको यी वर्गहरुको पहिचान गरी समस्याका बारेमा अन्तरक्रिया गर्नु नै मेरो मूल कार्य हुनेछ ।
चुनावमा पराजय हुनुभयो भने तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
मैले स्थानीय धेरै संस्थामा रहेर काम गरेँ । त्यतिमात्र होइन अघिल्लो कार्यकाल २०११ देखि २०१३ सम्म पनि एनआरएनको बोर्ड मै रहेर काम गरेँ । त्यस्तै २०१४ मा निर्वाचित भएर उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेँ । मलाई के विश्वास भयो भने हामी सबै नेपालीहरुको आवश्यकता समस्या जे भनौं यी सबै विषयको समाधान गर्ने आधिकारिक संस्था भनेको एनआरएन हो । यो संस्थामा रहेर मैले एञ्जोय गरिहेको छु । म नेतृत्वमा पुगिन वा चुनाव हारेँ भने म आफ्ना रचनात्मक एजेण्डा लिएर एनआरएनको ढोका ढक्ढकाउने छु । मेरा एजेण्डा गलत छन् भने उचित कारण खोज्नेछु । म सधै उहाँहरुसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नेछु । एनआरएनको भविष्य, प्रगति र एकताका लागि मेरो सधै साथ र सहयोग रहनेछु ।
बृहत्तर र एकताबद्ध एनआरएन मेरो पहिलो प्राथमिकता हो :: केशव पौडेल, अध्यक्ष उम्मेदवार एनआरएन अमेरिका
मेरो घोषणापत्र प्रकाशित भईसकेको छ । मेरा एजेण्डाहरु खसोखास लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशित पनि गरेका छन् । मेरो पहिलो मुद्दा भनेको अमेरिकामा एनआरएनको सदस्य संख्या बढाउने, बृहत र एकताबद्ध भन्ने मेरो मूल नारा नै छ । तीन सयबाट चार हजार र चार हजारबाट ११ हजार सदस्य पुगेको अवस्था छ । अव दुई वर्षभित्र यसलाई ४० हजार पु¥याउने मेरो उद्देश्य रहेको छ । दोस्रो नम्बरमा अमेरिकामा बस्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई नेपाल र नेपाली समुदायका निम्ति कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हुनेछ । त्यसका लागि म सँग योजना पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न समुह बनाएर अघि बढ्नेछु । त्यसले नेपाल, नेपाली र नेपालीत्वका लागि के गर्न सक्छ भन्ने योजना बनाउनेछु र त्यहि योजनाका आधारमा नेपालमा टेक्नोलोजि ट्रान्सफर गर्ने, यहाँको दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा गएर काम गर्ने वातावरण बनाउने, राम्रो भयो भने अमेरिकामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, त्यसलाई रिभर्स माईग्रेसन पनि भनिन्छ । त्यस्तै नेपालमा सानोदेखि ठूलो पूँजीसम्म लगानी गर्न चाहनेलाई अघि बढ्न मद्दत गर्ने । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी लगानीका लागि वातावरण बनाउने र देखिएका बाधा हटाउन पहल पगर्ने । अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले पैसा कमाएका हुन्छन् तर त्यसलाई कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान छैन । त्यसका लागि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नेछु । अर्कोकुरा नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि अहिले संविधानको खेस्रामा उल्लेख भए पनि संविधानमै लिपिबद्ध गराउनका लागि संसारभरीका एनसीसीसँगको समन्वयमा आईसीसीसँग सहकार्य गर्नेछु । त्यस्तै दोहोरो कर हटाउने विषयमा पनि पहल गर्नेछु । अमेरिकामा कमाएको पैसाको कर अमेरिकामै तिर्ने र नेपालमा कमाएको पैसाको कर नेपालमै तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल र अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्नेछु । त्यस्तै अमेरिकामा नेपालीहरुको वास्तविक संख्या कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन, त्यसका लागि वास्तविक तथ्यांक निकाल्न जरुरी छ । अमेरिकाको विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली समुदायको पहुँच पु¥याउन सहयोग गर्ने । एनआरएन अमेरिकालाई सम्पूर्ण नेपालीको साझा र छाता संगठनका रुपमा विकास गर्ने तथा व्यापक सदस्यता बृद्धि गर्न च्याप्टर र क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम गर्नुका साथै नेपाली खेलकुद, कला, संस्कृति एवं भाषाको संरक्षणका लागि समुदायबीच सम्पर्क हुने स्थानको निर्माण गर्न पहल गर्नेछु । त्यस्तै नेपालीहरुको बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा नेपाली दुतावासको पहुँच विस्तार गरी कन्सुलर सेवा पु¥याउन र सबै ठाउँमा नेपालीहरुलाई राहदानी सरल र सहजरुपमा उपलब्ध गराउन दुतावास र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछु ।
चुनावमा पराजय हुनुभयो भने तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
गतवर्षदेखि तपाईहरुले मेरो भूमिका हेर्नुभएकै छ । गतवर्ष बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उठेको अवस्थामा पनि खगेन्द्र जिसीलाई विना शर्त सहयोग गर्ने भनेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो । उहाँ अध्यक्ष भईसकेपछि पनि विभिन्न स्थानमा पुगेर कार्यक्रमहरु गरियो । उहाँलाई सुझाव र सहयोग गरियो । अध्यक्ष शेष घले आउँदा पनि चन्दा दिने र सहयोग गर्ने काम गरियो । अहिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई हेर्नुस् । पहिले उम्मेदवार भएका बाहेक अरु कुनै पनि पहिलेदेखि एनआरएनमा लागेका व्यक्ति होइनन् । केशव पौडेल यस्तो व्यक्ति हो, जो पद पाउँदा पनि नपाउँदा पनि काम गर्ने हो । केशव पौडेल हारे पनि जिते पनि केहि फरक पर्दैन । म केहि पाउन भनेर होइन दिनका लागि नेतृत्वमा जान लागेको हो ।
नेपालीहरुलाई नेपालसँग बाध्ने पुल बनाउन प्रयत्न गर्नेछु :: रमा सिंह, अध्यक्ष उम्मेदवार, एनआरएन अमेरिका
एनआरएन भनेको अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालसँग बाध्ने पुलका रुपमा मैले लिएकी छु । त्यसका लागि प्रयत्न गर्नेछु । संसारभर जहाँ रहेपनि नेपालीलाई नेपाली भएर बाँच्न सिकाउने संस्थाका रुपमा मैले यसलाई लिएकी छु । त्यसकारण यसका प्राथमिकताहरु धेरै हुनसक्छन् । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्नु एनआरन संगठनको दायीत्व हो । त्यो बाहेक अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको नेपालमा लगानी बढाउने, नेपालसँग आवद्ध गराइरहने खालका प्रोजेक्टहरु ल्याउने काम गर्नुपर्छ । दोहोरो नागरिकताको कुराहरु पनि त्यसैले आएको हो । दोहोरो करका कुराहरु छन् । यसबाहेक नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा हामी सबैजना नेपालमा वर्षका एकदुईपटक जाने वातावरण पनि बनिरहनेछ । विद्यार्थीहरुको एक्सचेन्ज कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा जन्मेका बच्चाहरुलाई नेपालबारे खासै थाहा हुँदैन । उनीहरुले नेपालबारे बाबुबाजेका मुखबाट सुनेका मात्र हुन्छन् । उनीहरुलाई एक्सचेन्ज कार्यक्रममा लग्नुपर्छ । यसबाट नेपालमा आर्थिक हिसाबले फाइदा पनि भइरहेको हुन्छ भने पछिल्लो पुस्ताका नेपालीहरुले नेपालीहरुलाई चिन्न पाइरहेका हुनेछन् । त्यो बाहेक जलविद्युतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जित्यो भने मैले यो यो गर्छु भनेर १५ बुंदाको एजेण्डा बनाएपनि मैले दुईवर्षमा त्यो सबै गर्न सक्दिन । प्राथमिकताका बुंदाहरु ख्याल गर्नुपर्छ । ग्रिनकार्ड होल्डरहरु एकवर्षभन्दा धेरै नेपालमा बस्न नपाउने समस्या छ । यस्ता समस्याहरुको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।
चुनावमा पराजित हुनुभयो भने तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
चुनाव भनेको एउटा खेलजस्तै हो । खेलमा या त हारिन्छ, या त जितिन्छ । एउटाले जित्नका लागि अर्कोले हार्नैपर्छ । हारेमा काम नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । जित्यो भने जे काम गर्न सकिन्छ, त्यो काम हारेमा पनि गर्न सकिन्छ । खाली संस्थागत रुपमा गर्न सकिन्न । व्यक्तिगत रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रमुख एजेण्डा एनआरएनको संस्थागत विकाश र यसको परिवर्तन हो :: गणेश कुँवर, अध्यक्ष उम्मेदवार, एनआरएन अमेरिका
मैले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिसकेको छु । मैले यो संस्थको संस्थागत विकाश र परिवर्तनका बारेमा मैले कुरा उठाएको छु । संस्थगत विकाश भन्नाले संस्थाको मूल्य, मान्यता र पारदर्शिताको कुरा रहनेछ । संस्थामा परिवर्तन भन्नाले काम गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन हो । समयमा काम गर्न सक्ने, जे बोल्यो त्यो गर्न सक्ने, रातारात निर्णय परिवर्तन नगर्ने, दीर्घकालिन लक्ष्य राखेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अमेरिकाको एनआरएन भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्था भएकाले र संस्थागत रुपमा विकाश नभईसकेकाले अहिलेको प्रमुख एजेण्डा नै यसको संस्थागत विकाश र यसको परिवर्तन हो ।
यसको बारेमा म एनआरएनमा उठ्नु अगाडिदेखि नै स्पष्ट छु । म आफू मानसिक र शारिरिक रुपमा यसको बारेमा तयार छु कि हामी एनआरएन संस्थामा भएपनि नभएपनि , चुनाव जितेपनि हारेपनि एनआरएन नै हौं । यो संस्था भनेको त सामुहिक रुपमा र एकीकृत रुपमा प्रवासी नेपालीहरुको अधिकार र मुद्दामा लड्नका लागि आवश्यक भएको हो । हामी छरिएर बसेमा त्यो आवाज दिन सकिदैन । त्यसैले यो चुनावमा हारेपनि जितेपनि म एनआरएन नै हो । यो संस्थाप्रति मैले गर्नुपर्ने कर्तब्य निरन्तर रहिरहनेछ । मैले हारेमा जित्ने साथीलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्नेछु ।
गर्नुपर्ने कामहरु घोषणपत्रमा लेखिएका भन्दा अलग छन् :: नगेन्द्र पौडेल, अध्यक्ष उम्मेदवार , एनआरएन अमेरिका
मैले जितेमा एनआरएन संगठनले गर्नुपर्ने कुरा गर्ने हो । गर्नुपर्ने कुराहरु कतै पुस्तकमा वा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु भन्दा अलग छन् । वास्तविकता अलग छ । नेपालीहरुको पहिलो पुस्ता अमेरिकामा आएको अवस्थामा नेपालप्रतिको हाम्रो उत्तरदायीत्व , नेपाललाई दिन सकिने कुराहरु, मौलिक अधिकारको सुरक्षाका लागि आप्रवासमा रहेर हामीले गर्न सक्न कुराहरुको बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाललाई हामीले दिन सकिने कुराहरु धेरै छ । विदेशी मुलुकमा कमाएको धन सम्पत्ति लगेर लगानी गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सले नै हाम्रो मुलुक चलेको अवस्था छ । त्यसलाई संगठीत रुपमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर गृहकार्य सुरु गर्ने हो । एकै कार्यकालमा यो पूरा हुँदैन । अर्कोतर्फ हामीले प्रवासमा रहदा पनि नेपालीत्वको नाता, नेपाली नागरिकताबाट पाउन सक्ने अधिकारहरु, सम्पत्तिको संरक्षण, आतेजातेको सुविधा लगायतका विषयहरुलाई हामीले संगठित गर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न जरुरी छ । यी कुराहरुमा एनआरएन आईसीसीसँग मिलेर सहकार्य गर्ने हो ।
पराजित भएपनि हामी एनआरएन नै हौं । आप्रवासीहरु नै हौं । आप्रवासी संगठनको आन्दोलन आन्दोलित अवस्थामा छ । संक्रमणबाट गुज्रेको छ । यदि म चुनावमा पराजित भएमा यो संस्थालाई हाँक्ने कुराबाट म केहीसमयका लागि वञ्चित भएपनि यो संस्थालाई मैले दिनसक्ने योगदान र सहयोग निरन्तर रहिरहनेछ । यो निरन्तरता आगामी धेरैवर्षसम्म जारी नै रहनेछ ।
(यो समाचार र अन्तर्वार्ता न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने खसोखास साप्ताहिकका सम्पादकद्वय किशोर पन्थी र गोकुल श्रेष्ठले तयार पार्नु भएको हो)